फेरी अर्को हवाई दुर्घटना! एयर अल्जेरिको जहाज उत्तरी मालीमा दुर्घटनाग्रस्त - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
फेरी अर्को हवाई दुर्घटना! एयर अल्जेरिको जहाज उत्तरी मालीमा दुर्घटनाग्रस्त
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०७१, शुक्रबार
एजेन्सीको सहयोगमा रमेश अधिकारी, असनेपाल न्युज/
साउन ९, काठमाडौँ- बिहिबार साँझदेखि सम्पर्क बिहिन भएको एयर अल्जेरिको AH5017 जहाज दुर्घटना भएको र त्यसको टुक्राहरू फेला परेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । चालक दलका सदस्यहरु र ११६ जना यात्रु बोकेको जहाज उत्तरी मालीमा दुर्घटना भएको हो । यात्रु मध्य आधा भन्दा बढी फ्रान्सेली नागरिक भएको बताइएको छ ।
एयर अल्जेरिको यही जहाज दुर्घटनामा परेको हो। तस्बिर- रोएटर्स
बुर्किना फासो बाट अल्जेरियाका लागि उडेको जहाज बिहिबार उडेको एक घन्टामा सम्पर्क बिहिन भएको थियो । सम्पर्क बिहिन हुनु भन्दा २ मिनट अगाडी पाइलटले मौसम खराब भएकाले रुट परिवर्तन गरिदिन आग्रह गरेको क्षेत्रिय उड्ययन अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
जहाजको खोजीमा लागेका २ वटा फ्रेन्च लडाकु बिमान र संयुक्त राष्ट्र संघका हेलिकोप्टरहरुले इस्लामिक अतिबादीको कब्जामा रहेको उत्तरी मालीमा जहाजका टुक्राहरू देखेका थिए । जहाजमा सवार सबै यात्रुको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको भए पनि बिस्तृत जानकारी भने आउन बाकी छ ।
महेश्वर शर्मा ,असनेपाल न्युज सिड्नी अष्ट्रेलिया ,अध्यात्मिक गुरु भीमसेन सापकोटा (आचार्य […]